အင်ဗာတာ DC သွေးခုန်နှုန်း TIG arc ဂဟေစက် VRTP400 (S-3)
TIG ကို arc ဂဟေစက် VRTP400 (S-3) rich ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်သောကြွယ်ဝသောနှင့်မတူညီသောသွေးခုန်နှုန်းလည်ပတ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည် ဂဟေ အဆိုပါ workpiece ၏ပုံသဏ္toာန်အရသိရသည်
TIG ဂဟေစက် 400TX4
1. TIG ဂဟေဆော်ခြင်းစနစ်ကို4သို့ပြောင်းရန်၊ အချိန်ကာလကို sequence ကို5ပြောင်းရန်။
Crater On ကိုရွေးချယ်သောအခါ 2.The ဓာတ်ငွေ့ Pre- စီးဆင်းမှု & Post- စီးဆင်းမှုအချိန်, လက်ရှိတန်ဖိုးများ, သွေးခုန်နှုန်းကြိမ်နှုန်း, တာဝန်သံသရာ & slop အချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
3. သွေးခုန်နှုန်းကြိမ်နှုန်းညှိနှိုင်းမှုအကွာအဝေး 0.1-500Hz ဖြစ်ပါတယ်။
ဂဟေစက်စက် workcell / ဂဟေစက်ရုပ်အလုပ်စခန်း
ဂဟေစက်ရုပ် workcell ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြားထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မော်တော်ယာဉ်နှင့်မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးစက်ယန္တရား၊ ရထားလမ်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ IC စက်ကိရိယာ၊ စစ်တပ်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆေးလိပ်၊ ဆေးဝါး၊ သတ္တုထည်လုပ်ငန်း၊ ပုံနှိပ်နှင့်ထုတ်ဝြေခင်းလုပ်ငန်းများတွင်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။
The စက်ရုပ် positioner ဂဟေစက်ရုပ်၏ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့်ဂဟေဆက်ခြင်းအားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေါင်းစပ်ခြင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများရိုးရှင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာရှိပြီးဂဟေဆော်အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဂဟေအနေအထားသို့လှည့်သို့မဟုတ်ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ဂဟေဆော်စက်ရုပ်တွင်စက်နှစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။ တစ်ခုမှာဂဟေဆော်ရန်ဖြစ်သည်၊ နောက်တစ်ခုမှာပစ္စည်းကို တင်၍ ချရန်ဖြစ်သည်။
စက်ရုပ်လက်ကိုင်ကိုကိုင်တွယ်, စက်ရုပ်ပစ္စည်းကိုင်တွယ်စနစ်များ, စက်ရုံလက်ကိုင်စက်ရုပ်, စက်ရုပ်ကိုကိုင်တွယ်ခြင်း6Axis, စက်ရုပ်ကိုကိုင်တွယ်ခြင်းအလိုအလျောက်, အော်တိုကိုင်တွယ်စက်ရုပ်,